أيوب 23 NAV - Hiob 23 AKCB
1Na Hiob buae se,
2“Nnɛ mpo, mʼanwiinwii mu da so yɛ den;
ne nsa ayɛ den, mʼapinisi nyinaa akyi.
3Sɛ minim baabi a mehu no;
anaasɛ metumi akɔ ne tenabea a
4anka mɛka mʼasɛm wɔ nʼanim
na magye akyinnye bebree.
5Anka mɛte mmuae a ɔde bɛma me,
na madwen nea ɔbɛka ho.
6Ɔbɛsɔre atia me dennen ana?
Dabi, ɔremmɔ me kwaadu.
7Ɛhɔ de, nnipa trenee betumi aka nʼasɛm wɔ nʼanim,
na wobegye me afi me temmufo nsam afebɔɔ.
8“Nanso sɛ mekɔ apuei fam a onni hɔ;
sɛ mekɔ atɔe fam nso a minhu no.
9Sɛ ɔreyɛ adwuma wɔ atifi fam a minhu no;
sɛ ɔdan ne ho kɔ anafo fam a, mʼani nhye ne ho.
10Nanso onim ɔkwan a menam so;
na sɛ ɔsɔ me hwɛ a mepue sɛ sikakɔkɔɔ.
11Madi nʼanammɔn akyi pɛɛ;
na manantew nʼakwan so a mamman.
12Mentwee me ho mfii mmara nsɛm a efi nʼanom no ho,
mama asɛm a efi nʼanom ho ahia me asen me daa aduan.
13“Nanso obiara nni hɔ ka ne ho, na hena na obetumi atia no?
Ɔyɛ biribiara a ɔpɛ.
14Ɔde ne mmaransɛm di dwuma tia me;
ɔda so kora nhyehyɛe a ɛte sɛɛ bebree.
15Ɛno nti na mebɔ hu wɔ nʼanim;
na sɛ midwen eyinom nyinaa ho a, misuro no.
16Onyankopɔn ama me koma abotow;
Otumfo ama mabɔ huboa.
17Nanso sum no mma menka mʼano nto mu,
sum kabii a ɛkata mʼanim no.
AKCB : Hiob 23